स्कूलकै साथी पनि कस्ता? साथीलार्इ मारेर विद्यालय बन्द गराउन निर्घात कुटपीट – PathivaraOnline
Home > अपराध > स्कूलकै साथी पनि कस्ता? साथीलार्इ मारेर विद्यालय बन्द गराउन निर्घात कुटपीट
स्कूलकै साथी पनि कस्ता? साथीलार्इ मारेर विद्यालय बन्द गराउन निर्घात कुटपीट
admin May 15, 2018 अपराध	0
चितवन । आफ्नै साथीको हत्या गरेर विद्यालय बन्द गराउने उद्देश्यका साथ यहाँको सैनिक महाविद्यालयमा एक विद्यार्थीलाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ । सैनिक आवासीय महाविद्यालय खैरहनी नगरपालिकाको पर्सास्थित आवासमा शनिबार बिहान ३ बजे कुटपिटको घटना भएको हो । आवासमा बसेका आफ्नै साथीहरुले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १० निवासी सिर्जना पौडेल लामिछानेका छोरा १४ वर्षीय श्रीनव लामिछानेलाई मार्ने उद्देश्यका साथ कुटपिट गरेका हुन् ।
पीडित बालककी आमा सिर्जनाका अनुसार, छोराको दायाँ आँखाको छेउमा गहिरो चोट लागेको छ भने आँखामुनिको हड्डी भाँचिएको छ । घाँटीमा हातले थिच्दा नील डाम परेको छ भने दुवै आँखामा रगत जमेको छ । पीडित बालकका अनुसार गहिरो घाउका कारण नाक र मुखबाट समय समयमा रगत बग्ने समस्या देखिएको छ ।
सिर्जनाका अनुसार बालकलाई भरतपुरको मनकामना अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा सिटी स्क्यानसहित स्वास्थ्य परीक्षणपछि आज प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरिँदैछ । उनले भनिन् – “घटना भएपछि विद्यालयले घटना लुकाउन समयमै जानकारी पनि दिएन ।” अन्य अभिभावकबाट सूचना पाएपछि आफूले शनिबार दिउँसोमात्रै छोरालाई भेटेर घर ल्याएको र उपचार थालेको उनले बताइन् ।
कक्षा ९ मा अध्ययनरत श्रीनवले घटना विवरण सुनाउँदै भने, “बिहान ३ बजेतिर साथी अनिस श्रेष्ठले पिसाब फेर्न जाउँ भन्यो । सँगै म शौचालय गएँ । सधैँ नयाँ साथी क्रिस थापाले शौचालय जाउँ भन्थ्यो, त्यो दिन अनिसले भन्यो । रिवाज रेग्मी शौचालयको ढोकामा लुकेर बसेको रहेछ । मैले रिवाजलाई देख्नेबित्तिकै झस्किएँ । यहाँ किन लुकेको भनेँ ।” घटना सुनाउँदै श्रीनवले अगाडि भने, “अर्को साथी क्रिस थापाले पछाडि आएर मेरो घाँटी न्याँक्यो र भित्तामा ठोक्काएर न्याँकिरह्यो, म चिच्याइरहेँ । मलाई धारोको टुटीमा पनि ठोक्याए, धारो भाँच्चियो । त्यतिबेला अरु दुईजना, सुयोग श्रेष्ठ र रिजन श्रेष्ठ पिसाब फेर्न आए, क्रिसले उनीहरुले चुप लाग, उता जा भन्यो । त्यतिबेलै म चिच्याएको मेरो बेड पार्टनर सुयोग खनालले सुनेछ । उसले पालेलाई भनेछ । पालेदाइ आएपछि उनीहरु भागे ।”
क्रिस थापा भन्ने विद्यार्थी कक्षा ६ मा पनि त्यही विद्यालयमा अध्ययन गरेको तर विभिन्न बहाना पारी घर जाने गरेको श्रीनवले सुनाए । त्यसपछि बीचमा उक्त विद्यालय छोडेर अन्यत्र पढ्न गएका क्रिस पुनः कक्षा ९ मा सो विद्यालयमा आएको उनले बताए । क्रिसले एकजना साथी मारेमा विद्यालय बन्द हुने र यहाँ पढ्न र बस्न नपर्ने बताउँदै आएको श्रीनवले बताए ।
घटनापछि श्रीनवलाई बिहान ३:४५ बजे स्थानीय चौधरी पोलिक्लिनिकमा उपचार गरिएको श्रीनवले बताए । बिहान १० बजेतिर विद्यालयका निमित्त प्राचार्य भविलाल न्यूरेले पीडित बालकका बुबा नवराज लामिछानेलाई टेलिफोन गरेको तर घटनाको विषयमा केही नबताएको लामिछानेले बताए । पीडित बालकका परिवारले जघन्य घटना हुँदासमेत विद्यालयले लुकाएको आरोप लगाएका छन् ।
विद्यालयका निमित्त प्राचार्य न्यूरेले टेलिफोन उठाएनन् भने विद्यालय हेर्र्दै आएका मेजर प्रकाश अधिकारीले घटनाका बारेमा बोल्न नमिल्ने बताए । सो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले घटनामा संलग्न तीनजना विद्यार्थीलाई निलम्बन गरिएको बताए । उनले पीडित विद्यार्थी आराम गरिरहेको जानकारी दिए ।
कक्षा ६ भन्दामाथि मात्रै पढाइ हुने सो विद्यालयमा छात्रलाई अनिवार्य आवासमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने छात्रालाई घरबाटै आउने जाने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस
महोत्तरीको जनकपुर सडकखण्डमा दुःखद बस दुर्घटना, यति धेरै घाइते…
मोदीले दिएको चेतावनी बारे मनमोहन सिंहले लेखे राष्ट्रपतिलाई यस्तो पत्र
कोहि बुहारी रञ्जना जस्ती कोहि प्रमिला जस्ती! खाडीमा कमाएको सम्पत्ति, श्रीमान र दुई छोराछोरीको आमाले गरिन यस्तो ! (भिडियो सहित)
आफ्नै घरमा रगतमा लत्पतिएकि पूर्वसचिवकि श्रीमतिका यस्तो विभत्स ह त्या! हेर्नुहाेस्
सेजलको बेडरुममा देखियो हेर्ने नसकिने देखिए यस्ता दृश्यहरु… (भिडियो सहित)
पिडित महिलाको बयानले मेलम्चीमा सहयोग गर्न पुगेकि कल्पना दाहालको यस्तो रुवाबासी (भिडियो हेर्नुस्)
नर्स सेजल कोइरालाको रह स्यम य मृत्यु भएको कोठा खोलेर हेर्दा देखियो च कित पर्ने दृष्य (भिडियो हेर्नुस्)
अन्तरजातिय प्रेम अनि बिबाह गरेकै कारण यी युवाले गु’माए आ’फ्नै ज्या’न …..
प्रेमीसँग अलग बसेको एक बर्षपछि यी नायिका कसरी भइन् गर्भवती ? अब भएनत बबाल